ပြောတတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ . . . – Healthy Life Journal
Posted on ဩဂုတျ 29, 2019
ပင်ပန်းနေတဲ့ မိန်းမက အေးအေးလူလူ သက်သောင့်သက်သာနေတတ်တဲ့ ယောက်ျားကို စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ ပြောတယ်။
“တစ်နေ့လုံး ကျွန်မ အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်ရတယ်၊ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ချက်ပြုတ်ဆေးကြောရတယ်၊ ကလေးတွေ ထိန်းရတယ်၊ ကလေးတွေ ဝေယျာဝစ္စလုပ်ရတယ်၊ အ၀တ်တွေလျှော် ဖွပ်မီးပူတိုက်ရတယ်။ ရှင် ဘာလုပ်သလဲပြော၊ ရှင် တစ်နေ့လုံး ဘာလုပ်နေလဲ . .”
“အော် . . မိန်းမရယ်၊ ငါ . .ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲ တွေးနေတာပါ၊ မင်းမှာ သိပ်ကိုလှပတဲ့ မျက်ဝန်းတွေရှိတယ်၊ ဘယ်အချိန်မဆို ပြုံးလိုက်ရင် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ အပြုံးချိုချိုလေးတွေရှိတယ် . . မင်းနဲ့တူသလားတန်သလားလို့ ငါ့ကိုယ်ငါ တွေးနေတာပါကွာ”
“အိမ်အလုပ်၊ ကလေးတာဝန်တွေနဲ့ ရှင့်ကိုဂရုမစိုက်မိတာကြာပြီ ယောက်ျား . . ရှင်ဒီညနေ ဘာစားချင်လဲဟင်”
Related Items:Featured, fun, Laughing, laughter